Mogadishu Journal » Turkey 4-2 Netherlands: Yilmaz ayaa quusiyay Dutch kulan xiiso badan oo furitaanka isreebreebka Koobka Adduunka ah
Netherlands ayaa si liidata ku bilaabatay isreebreebka Koobka Adduunka iyadoo Burak Yilmaz uu ku dhiirrigeliyay Turkey guul weyn.
Burak Yilmaz ayaa dib ugu soo laabtay sanadihii u dambeeyay si uu u dhaliyo seddexleey cajiib ah iyadoo Turkiga uu iska caabiyay dagaal isla markaana uu Netherlands u diray guuldarro 4-2 ah kulankoodii furitaanka isreebreebka Koobka Adduunka ee 2022.
Weeraryahanka halyeeyga ah Yilmaz ma uusan dhalinin gool caalami ah labo sano ka hor goolal qeybtii hore ee ciyaarta kaasoo Turkiga gacanta ku dhigay qeybtii hore ee ciyaartii Group G ee ka dhacday Ataturk Stadium.
Hakan Calhanoglu dadaalkiisii ​​wacnaa ee 31 ilbiriqsi ah ayaa ka dhigay Holland niyad jab laakiin goolal deg deg ah oo ay kala dhaliyeen Davy Klaassen iyo Luuk de Jong oo bedel ku soo galay ayaa soo bandhigay rajo dhibic aan macquul aheyn oo ay ka harsan tahay 15 daqiiqo.
Laakiin 35 jirka Yilmaz ayaa soo gabagabeeyay dhibcaha isla markaana hubiyay inuu la baxayo kubbadda cagta isagoo laad xor ah oo cajiib ah sagaal daqiiqo ka hadhay, martida ayaa si xun u soo baxday iyada oo ay ugu sii dartay Memphis Depay oo rigoore daahay.
Yilmaz wuxuu u baahday gacan caawinaad si uu udhameeyo 10 xul oo caalami ah oo aan gool lahen, iyadoo kabtanka suulkiisa aan waxba galabsan uu leexsaday Matthijs de Light iyo kubad qaldan Tim Krul.
Donyell Malen ayaa helay laba fursadood oo waaweyn labada dhinac ee furitaanka ka dibna waxaa lagu xukumay inuu jiiday Okay Yokuslu aagga, iyadoo Yilmaz uu si muuqata u labanlaabay goolashiisa 34 daqiiqo ka dib.
De Ligt ayaa madax ku hor istaagay birta waxaana lagu qanciyay in kubbadu xariiqda dhaaftay ka hor inta aanu madaxa okay cadeyn laakiin kooxda martida ah ayaa labo ka mid ah ku raagtay nasashada.
Waxyaabaha ayaa sii xumaaday wax ka yar hal daqiiqo markii ay socotay qeybtii hore markii xiddigga Milan Calhanoglu uu kubad 25-yaard ah uu quusiyay oo uu khiyaameeyay Krul ka hor inta uusan ku fariisin geeska midig ee hoose.
Steven Berghuis ayaa soo laaday laad xor ah oo cidhiidhi ah wuxuuna arkay sheegashooyinka rigoore ee kubbadda gacanta ee Okay oo ka timid qayb kale oo loo gacan haadiyay iyadoo kooxda martida ah ay isku dayeen inay isu soo baxaan.
Klaassen ayaa dib u soo jiiday ka dib markii uu ku leexday aagga ku habboon halyeeyga Johan Cruyff - oo ku habboon sannad-guuradii shanaad ee geeridii weyn ee Barcelona - iyo De Jong ayaa arkay hal dhibic ka dib markii Ugurcan Cakir uu isku dayay inuu kubad ku taabto aagga si uu u dhigo. finalka tarabuunka.
Laakiin Yilmaz ayaa si deg deg ah u baabi'isay rajadii Dutch-ka iyadoo laad xor ah oo onkod leh oo bidix ka timid aagga geeska kore ee kore isla markaana Depay waxaa u diiday Cakir meel 12 yaard ah ka dib markii Ozan Kabak uu ku dhuftay De Ligt aagga si uu u soo gabagabeeyo banaanka. martida.
Maamulka Jubbaland oo ka hadlay heshiiska dhax maray Dowlada iyo Cabdirashiid Janan